Facebook ကစမ်းသပ် Messenger ကိုအတွက် Snapchat စတိုင် Self-destructing ချက်တင် - သတင်း Rule
Facebook ကစမ်းသပ် Messenger ကိုအတွက် Snapchat စတိုင် Self-destructing ချက်တင်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Facebook ကစမ်းသပ် Messenger ကိုအတွက် Snapchat စတိုင် Self-destructing ချက်တင်” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 13 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 10.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Facebook ကပြင်သစ်အတွက်၎င်း၏ Messenger ကို app ကိုအတွင်း Snapchat စတိုင်ပျောက်ကွယ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစမ်းသပ်နေသည်, အသုံးပြုသူများအကကိုစလှေတျပွီးနောကျ Self-ဖျက်ဆီးဖို့တစ်နာရီသတင်းစကားတစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့စွမ်းရည်ရာပူဇော်သက္ကာ.
ရိုးရှင်းစွာ Messenger ကို app ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ hourglass icon ကိုနှိပ်စွမ်းရည်အပေါ်လှည့်, သောကပိတ်ထားင်သည်အထိတက်ကြွနေဆဲ. ဒါဟာအခြားစာတိုပေးပို့ရေး app များအတွက် features တွေကိုထင်ဟပ်: Snapchat, ဥပမာအားဖြင့်, မက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ကြိမ်ဖတ်ဖယ်ရှားပေး, Google ရဲ့စကားပြောခန်းပလက်ဖောင်းသမိုင်း၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခံရခြင်းမှစကားပြောဆိုချက်တွေကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းကမ်းလှမ်းစဉ်.
Buzzfeed မှကြေညာချက်ထဲမှာ, သောပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ဖော်ပြခဲ့သည်, Facebook ကပြောပါတယ်: "ကျနော်တို့ Messenger ကိုအများဆုံးအရေးပါသောလူနှငျ့ဆကျသှယျဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းချမှတ်ဆီသို့ဦးတည်ရည်ရွယ် optional ကိုထုတ်ကုန် features တွေကိုတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လိုင်းထဲမှာနောက်ဆုံးကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေ.
"ဒီနေ့စတင်ခြင်း, ကျွန်တော်သူတို့ကိုစလှေတျနေပြီးနောက်လူတစ်နာရီပျောက်ကွယ်သွားကြောင်းမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အင်္ဂါရပ်၏ပြင်သစ်တွင်သေးငယ်တဲ့စမ်းသပ်ပို့ချနေတာပါ. မက်ဆေ့ခ်ျများပျောက်ကွယ်လူသူတို့ Messenger ကိုအပေါ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာသောအခါမှရှေးခယျြဖို့အခြားပျော်စရာ option ကိုပေးထားတယ်. သူတို့ကတစ်ဦးပါပေးအဖြစ်ကျနော်တို့လူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ဒါဟာ Facebook ကပေါ်ပင်စာတိုပေးပို့ရေးနှင့်အတူစမ်းသပ်ထားပြီးပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး. ဟောင်းဝယ်ယူပစ်မှတ် - - အဆိုပါကုမ္ပဏီရက်ရက်စက်စက်ပြိုင်ဘက်လောင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ် Snapchat, န်ဆောင်မှုတစ်ခု In-အိမျတျောကိုအခြားရွေးချယ်စရာရာပူဇော်သက္ကာကိုရည်ရွယ်သုံးယခင် apps များထက်မနည်းပါးလာစတင်.
တွင် 2012, "ထိုး"နာမည်ကြီးရုံအတွက် coded ခဲ့သည် 12 လက်ထက်, နှင့် Snapchat အတွေ့အကြုံတခုနီးပါးတဘို့တမိတ္တူကိုကမ်းလှမ်း. သို့သော်ထို app ကိုလူကြိုက်ခဲ့သည်, နှစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်ဦးထက်ပို Full-featured ပြိုင်ဘက် "၏ form မှာဖြန့်ချိခဲ့သည်Slingshot".
Slingshot ဆဲ Snapchat ၏ပေါ်ပင်စာတိုပေးပို့ရေးကိုကမ်းလှမ်း, ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနည်းငယ်စပွေီးမှကမ်းလှမ်းခဲ့, အများဆုံးအထူးသသတင်းစကားတစ်ခုရှေ့မှာအပြန်တစ်ဦးဓာတ်ပုံလိုအပ်နိုင်စွမ်းကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြောင်း. ထိုအမတူဘဲ Poke, က App Store တွင် download လုပ်ဆဲရရှိနိုင်ပါသည်.
24257	0 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, Facebook က, သတင်း, နည်းပညာ
← အမေဇုံ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သုံးသပ် မောင်းသူမဲ့ကား မှစ. Jetpack မှ →